लाभ म्यारिज गरेकी श्रीमती पोइला गएपछि मलेसियामा भयो श्रीमानको मृ’त्यु ! - jagritikhabar.com
लाभ म्यारिज गरेकी श्रीमती पोइला गएपछि मलेसियामा भयो श्रीमानको मृ’त्यु !
एकसता अघि मलेशियामा मृ’त्यु भएका तेह्रथुमका दिलकुमार बुढाथोकीको श’व आज नेपाल आउने भएको छ । उनको श’व मलेशियाबाट आज आउने दिलकुमारका दाई तुलसी बुढाथोकीले बताएका छन् ।गएको हप्ता उनको सुतेकै अवस्थामा ज्यान गएको मलेशियामा कार्यरत नेपालीहरुले बताएका छन् ।
दिलकुमार आठराई गाउँपालिका- ६, तत्कालीन चुहानडाँडा गाविस ४ भदौरेका हुन् । ३४ वर्षका उनी करिब ४ वर्षअघि बैदेशिक रोजगारीको शीलशिलामा मलेशिया पुगेका थिए ।
उनको मृ’त्युका बारेमा ठोस कारण खुल्न सकेको छैन । कम्पनीले सबै रि’पोर्टहरु तयार गरेको भएपनि मृत्युको खास कारण भने खुलाएको छैन ।कम्पनीमा सँगै काम गर्ने नेपाली कामदारहरुका अनुसार उनी सामानय अवस्थामै थिए मृ’त्यु भएको अघिल्लो दिन ।सामान्य अवस्थामै रहेका उनले त्यो दिन कोरोना भाइर’सबि’रुद्धको तेस्रो डोज खो’प लगाएको उनका साथीहरुले बताएका छन् ।
कोरोना खो’पमाथि शंका
मृ’तक दिलकुमारका भान्जा रोशन दंगालका अनुसार अघिल्लो दिन कोरोना भाइ’रसबि’रुद्धको तेस्रो डोज खोप लगाएका थिए । त्यसै राति उनी विते ।‘कुनै पनि समस्या नभइ मामा सामान्य अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो । अघिल्लो दिन को’रोनाको खो’प चाही लगाउनुभएको थियो रे ।
उहाँका साथीहरुले भनेको,’ दिलकुमारका भान्जा रोशनले न्यूज २४ सँग भने, ‘राति खाना खाएर उहाँ आफ्नो बेडमा सुत्न जानुभयो। हामी हाम्रो कोठामा सुत्यौँ । हामी बिहान उठ्यौँ । तर उहाँ उठ्नुभएन।’
रोशन हाल मलेशियामै कार्यरत छन् । उनलाई पनि कोरोनाको खोपले केही असर गरेको सुनाए । रोशनलाई मृत्युको कारण मेडिकल रि’पोर्टबारे सोध्दा ह’र्टआ’ट्याक भनेर भनेको बताएका छन् । तर त्यो कुनै ठोस रुपमा प्रमाण नदिइ कम्पनीले दावी गर्दै आएको मात्रै बताए ।
उता दिलकुमारको परीवारले पनि मृत्यु हुनुअघि सञ्चै भएको भन्दै कुराकानी गरेको बताएको छ ।दिलकुमारका दाई तुलसी बुढाथोकीले भाइले अघिल्लो दिन आफू सञ्चै भएको भन्दै फोनमा कुरा भएको सुनाए ।
दिलकुमारले १० वर्षअघि तेह्रथुमकै एक युवतीसँग प्रेम विवाह गरेका थिए । उनी क्षेत्रीकै छोरा भएपनि भागी विवाह गरेका थिए । लामो समयसम्मै उनको प्रेम चल्यो । तर युवतीको आमाबुबाले माग्न जाँदा नदिने सम्भावना बढेपछि उनले भगाएर विहे गर्ने निधो गरे । र, उनले चैतको बेला भगाएर घर त्याउने प्रयास गरेका थिए ।
उनको सुइको पत्तो पाएपछि युवतीका बुबाले उनीहरुको पीछा गर्दै तमोर खोलासम्म पछ्याएर छोरी फर्काउने गरि आएको थिए ।
त्यसपछि खोलामा हुनेवाला ससुरा र दिलकुमारको तमोर खोला झण्डै हात हालाहाकै स्थिती भएको उनले सुनाएका थिए । तर उनी आफ्नो प्रेमिकालाई आफ्नो बनाउन सफल भए।उनीहरुको विवाह पनि भयो ।
उनीहरुको छोरा पनि भयो । तर दिलकुमार आर्थिक समृद्धि र सुखद भविश्यका लागि विदेशिन पुगेका थिए ।
उनी विदेशिएको २ वर्षपछि उनीक श्रीमति अर्कै पुरुषसँग विवाह गरेर गइन् । उनीहरुको एक सन्तान छोरा छन् । ती छोरा उनका दाई तुलसीका काखमा छन् ।
श्रीमतीबाट धोका भएपछि उनी पीडामा थिए । तर उनलाई बाँच्ने रहर भने थुप्रै थियो । उनी आफ्नो छोरासँग दिनैजासो म्यासेन्जरमा कुरा गर्ने गर्दथे । र, खुसी साट्ने गर्दथे ।
अहिले सँधै बुबा-आमा खोज्ने भतिजोलाई बुबासँग फेशबुक म्यासेन्जरमा कुराकानी गराउँदै आएको र कुरा गर्दा खुसी हुने गरेका तुलसीले बताए । तर अब उसको त्यो चाहना र खुसीमा पनि कहिल्यौ नखुल्ने बादल लागेको छ । न्युज २४ बाट